Ny tranga momba ny zom-pirenena Saint Lucia
Ny tranga ho antsika Olom-pirenena Saint Lucia
Betsaka ny anton-javatra tokony hodinihina rehefa mifidy firenena ho olom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola. Namorona zom-pirenena amin'ny alàlan'ny programa fampiasam-bola izahay mba hampifanaraka ny hetahetan'ny mpangataka rehetra. Manomboka amin'ny sehatra fampiasam-bola efatra tsy manam-paharoa, hatramin'ny mpamatsy vola elite isan-taona, hatramin'ny fifandraisanay amin'ny kolontsaina, manasa anao izahay hankafy ny fiainana sy ny fanambinana miaraka aminay.
Ny vidin'ny fampiasam-bola any Saint Lucia hahazoana ny zom-pirenena dia napetraka fa mitovy amin'ny programa mitovy amin'izany. Ny mpangataka dia misafidy safidy efatra izay manomboka amin'ny sandam-bola US $ 100,000 ka hatramin'ny $ 3,500,000 ho an'ny mpangataka tokana. Ny mpangataka dia antenaina ihany koa handoa ny sarany fanodinana sy fitantanana mifandraika amin'ny fampiharana azy ireo.
Ny fangatahana zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Saint Lucia dia ho tanterahana ao anatin'ny telo volana aorian'ilay fangatahana ekena ho fanodinana ny vondron'ny olom-pirenena amin'ny maha-olom-pirenena.
Tamin'ny taona 2019 dia nanana visa tsy misy visa na visa ny olompirenena Saint Lucian raha tonga tany amin'ny tany sy faritany dimy amby efa-polo amby zato (145), ary izany no toerana misy ny pasipaoro Saint Lucian faha-31 manerantany araka ny tenin'ny Henley Passport Index sy ny Global Mobility Report 2019.
Ny olom-pirenena Saint Lucian dia afaka mankafy ny fidirana amin'ny firenena maro ao anatin'izany ny Vondrona Eropeana, ny faritra hafa any Karaiba sy Amerika Atsimo.
I Saint Lucia dia manana fiainana manana kalitao ampanaovin'ny toerana vitsy eto amin'izao tontolo izao. Izahay dia manana taha kely amin'ny heloka bevava, fidirana amin'ireo trano maoderina, serivisy ary fotodrafitrasa, trano fisakafoanana ary trano fandraisam-bahiny ary trano fonenana voalohany.
Ny mponina dia manana ny safidin'ny fiainana hipaka kokoa amin'ny ivon-toerana misy ny mponina na ny akaikin'ny tanindrazana milamina kokoa mba hankafizany ny fiainana maintso. Maherin'ny adiny iray dia tsy andehanana miala any avaratra mankany atsimon'ny Nosy amin'ny andro fifamoivoizana maivana, ka tsy misy toerana be loatra.
Mahafinaritra ny hafanana eo anelanelan'ny 77 ° F (25 ° C) ary 80 ° F (27 ° C) ao anatin'ny taona iray manodidina ny toetr'andro tropikaly mandanjalanja ny rivotra mifono atsinanana. Ny ankamaroan'ny orana dia maharitra afa-tsy minitra vitsy monja isaky ny misy toetr'andro fantatra amin'ny filalaovana.
Na iza na iza mangataka zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Saint Lucia dia tsy maintsy manao izany amin'ny alàlan'ny fahazoan-dàlana nahazo alalana. Nisy lisitra fanamarinana antontan-taratasy SL1 nomena ny mpangataka tsirairay. Ny lisitra fanamarihana momba ny antontan-taratasy dia mila antsipirihany ny tokony omen'ny mpangataka tsirairay mba hahavitana ny fangatahan'izy ireo.